एउटा मान्छे जिउँदै छ मनमा… | Indrenionline.com
पुष्पकमल दाहाल अर्थात प्रचण्ड कतिपटक यो बाटोघाटो वा आकाशमा ओहोरदोहोर गरे होलान् ? खै, त्यसको लेखाजोखा छैन मसँग । किनकि एकपटक पनि आएन यस्तो म्यासेज, ‘‘जेठान कता ? म तपाईंको माथि आकाशमा ।’’ न आयो आकाशबाट खिचेको दाङको तस्वीर, न आयो कुनै खुशी र पीडाको सन्देश । सुनसान, सुनसान अनि सुनसान । यो बीचमा धेरै चाडपर्वहरु आए तर न कहिल्यै कुनै गुनासो आए, न कहिल्यै समाचार आए, न कहिल्यै खुशीका खबर आए, न कहिल्यै शुभकामना !
त्यो सिंहदरबार ! जिन्दगीको त्यो यात्रासम्म कहिल्यै पसिएन त्यता । कताबाट मान्छे छिर्ने हो ? कताबाट गाडी छिर्ने हो ? कताबाट ठूला मान्छे छिर्ने ? कताबाट साना मान्छे छिर्ने ? कसरी पो छिर्ने ? तिमी थियौ, त्यसैले अनायासै मोडियो पाइला सिंहदरबारतिर । पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेको यो मनुवालाई तिम्रै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सहजै भेट भो र खिचियो एउटा तस्वीर । तिम्रो अकल्पनीय देहावसानपछि धेरैपटक त्यो सिंहदरवार छिर्ने योग जुर्यो, तिमीलाई खोजिरह्यो यो मन, तिमीलाई खोजिरहे यी आँखा । खै, सदासदाका लागि निभेको प्रकाश कहाँ देखिन्थ्यो र ? कहाँ भेटिन्थ्यो र ? तर पनि खै यो मन, यी आँखा मूर्खता गरिरहन्छन्, फेरि पनि गरिरहन्छन् ।
मलाई थाहा छ, तिम्रा झिनामसिना मानवीय कमजोरीहरु ढुकेर बस्ने र ‘तिललाई पहाड’ बनाई पिता प्रचण्डमाथि प्रहार गर्नेहरु धेरै थिए र उनीहरुले तिम्रो छवि ‘पारस’ बनाइदिए । नयाँ दिल्लीमा बसिरहेको मान्छेलाई ‘सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका’मा मोज गरिरहेको भन्ने समाचार पनि यिनै आँखाले हेर्नुपर्यो । आज कोहीकोही दूधले धोएको ‘चोखो’ बनेर साखुल्ले बनिरहेका पनि भेटिन्छन्, देखिन्छन् । हुन त मृत्युपछि सबै खत माफ हुन्छ भन्छन् तर तिनीहरु ‘गोहीको आँसु’ भन्दा केही लाग्दैनन् । मिडियाबाट सर्वाधिक लखेटिएको र पीडित मान्छे भएर पनि कहिल्यै मिडियाप्रति बक्रदृष्टि नराखी उनीहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा तिमीले मोर्चा सम्हालेको देख्दा जिब्रो टोक्न वाध्य भएका थिए सबै । मलाई थाहा छ, तिम्रो एउटै सपना र जपना थियो, प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल जसरी पनि सफल बनाउनु ।
‘कालको जेठोकान्छो कोही हुँदैन’ भन्छन् बूढापाकाहरु । अकल्पनीय पीडा थप्दै अस्तायो प्रकाश, निभ्यो प्रकाश । विगतका ती मीठा पलहरु र सम्झनाहरुलाई साँच्दै र बाँच्नुको विकल्प छैन । हामी सबैबाट तिमी विदा भए पनि हामी भुल्ने छैनौं तिमी र तिम्रा योगदानलाई । एउटा मान्छे जिउँदैछ मनमा !!!
Previous: अब गाईको जन्म, मृत्यु र बसाइसराई दर्ता
Next: एनजीओलाई २० अर्ब बजेट, खर्च कहाँ भयो थाहा छैन